I-Musique: Isidlali somculo esivuselelwe futhi esihlukile se-GNU / Linux | Kusuka kuLinux
Ukufaka kwe-Linux Post | 24/07/2021 06:00 | Aplicaciones
Kakade, ngaphezulu kwe- iminyaka 7 lapho siqala ukuhlola i- uhlelo lokusebenza lwamahhala, oluvulekile, olukhululekile nolunama-multiplatform kusuka emkhakheni we-multimedia obizwa «Umculo».
«Umculo» ingenye yeziningi "Abadlali bezindaba" ekhona yethu Izinhlelo Zokusebenza ze-GNU / Linux. Kodwa-ke, njengalo lonke uhlelo lokusebenza olukhona, inezinto eziningi ezintsha ezizithuthukisayo ngokuhamba kwesikhathi, nezinto ezikhethekile ezizihlukanisa nabanye. Ngakho-ke namuhla, sizohlola ukuthi kubuyisani.
Okwalabo abafisa ukuhlola i- okuthunyelwe kwangaphambilini okuhlobene con «Umculo» Ngezintshisekelo ezilula noma ngezizathu zokuqhathanisa ukuthi kushintshe kanjani nokwazi umbono wethu owedlule, sizoshiya isixhumanisi esingezansi:
UMusique wenziwe nguFlavio Tordini, umbhali wezinhlelo ezithandwa kakhulu ezifana neMinitube neMusictube. Eqinisweni, iMusique iyathakazelisa kakhulu, ngoba inikela ngezinguqulo zeWindows, OS X ne-GNU / Linux, kanti ngenkathi iminikelo yamukelwa eyokugcina, kokunye kunenketho yokuyithenga. Ngokusobala sikhuluma ngomdlali ukuthi ngokusibheka nje, siyazi ukuthi ifuna ukuba yindlela elula futhi encane ku-iTunes. Futhi ngikholwa ukuthi iyafeza inhloso yayo, elula futhi elula engenakwenzeka. UMusque: Umdlali wesimanje futhi omuhle, kodwa ...
Sincoma nokwazi lokhu esinye isidlali semidiya esithakazelisayo futhi esihlukile okusanda kuhlolwa:
1 UMusque: Isidlali somculo esakhiwe kahle kakhulu
2 Yini uMusique?
2.2 Ulwazi oluningi
2.2.2 Ukufakwa nokusetshenziswa
2.2.3 Izithombe zesikrini
UMusque: Isidlali somculo esakhiwe kahle kakhulu
Ku Iwebhusayithi esemthethweni yeGitHub de «Umculo», ichazwa ngale ndlela elandelayo:
"UMusique isidlali somculo esakhelwe ijubane, ubulula, nesitayela. Kubhalwe ku-C ++ kusetshenziswa uhlaka lwe-Qt. Iminikelo yamukelekile, ikakhulukazi endaweni yokuhlanganiswa nedeskithophu ye-Linux."
Ngenkathi esekwakhe Iwebhusayithi esemthethweni, okulandelayo kungezwa:
"I-Musique ikuvumela ukuthi ulalele umculo wakho ngesixhumi esibonakalayo esihlanzekile nesintsha. IMusique ilungele izingane namanye amalungu omndeni angathola abanye abadlali bexakeke kakhulu futhi beba nzima."
Phakathi kwakhe izici zamanje nezindaba Okufanele kakhulu yilokhu okulandelayo:
Kuyashesha kakhulu ukuqala, kukhanya kakhulu ukusebenza ngakho futhi kungaphatha kalula amaqoqo amakhulu kakhulu.
Ikuvumela ukuthi udlulise amehlo ezithombeni zomculi, izembozo ze-albhamu, izinhlobo namafolda futhi, ngokuphathwa okungcono komuntu siqu.
Inokubukwa kolwazi lokuntywila okungashintshwa ngenkathi ulalele umculo. Futhi, kukhombisa imininingwane ngethrekhi yamanje, i-albhamu nomculi.
Ixhasa amafomethi amaningi alalelwayo, kufaka phakathi: i-FLAC, i-OGG Vorbis, i-Monkey's Audio (APE), i-Musepack (MPC), i-WavPack (i-WV), i-True Audio (i-TTA), phakathi kwabanye abaningi.
Ayilokothi iguqule amafayela aphethwe, futhi igcine yonke idatha esebenzayo ku-database yayo.
It has support for scrobbling ku-Last.fm.
Futhi ngokusho komdali wayo: «Umculo» akuyona umphelelisi we iTunes. Kuyinto isicelo esizimele ngokuphelele esenza into eyodwa futhi siyenze kahle.
Ngecala lethu lokusebenzisa, sizofaka «Umculo» kusuka ezinqolobaneni zomdabu zokujwayelekile kwethu Phendula i-Linux kubizwa Izimangaliso GNU / Linux, okusekelwe I-MX Linux 19 (I-Debian 10), futhi lokho kwakhiwe ngokulandela i- «Umhlahlandlela we-Snapshot MX Linux», ngoba inguqulo etholakalayo indala kakhulu.
Futhi njengoba, akungeni Ifomethi ye-AppImage, kanye nephakeji lakho ku ifomethi .deb kusinikeza izinkinga zokuhambisana ngenombolo yenguqulo yokuncika, sizokwenza okulandelayo ukulanda okuqondile nendlela yokufaka itholakala ku- Indawo yokugcina izinto zeGitHub:
Kakade ngemuva kokusebenzisa yonke le miyalo yomyalo ngendlela egculisayo, kuzofanele sikwenze «Umculo» ifakwe enguqulweni yayo yakamuva etholakalayo, futhi ilungele ukusetshenziswa nge Imenyu yezicelo noma nge ukuphela (ikhonsoli), njengoba ubona ngezansi.
Njengoba ubona, «Umculo» kufanele ukwazi futhi uzame, ngoba, its inguqulo yamanje iyatholakala (1.10.1) kunokuningi angakunikeza.
Ngokufingqa, «Umculo» okwamanje i- "Umdlali wezindaba ovuselelwe nomunye" okuqhubeka nokwenziwa ngu UFlavio Tordini, nokuthi phakathi kwezinto eziningi ezinhle nezihehayo namuhla, isinikeza izinto eziningi njengokusivumela ukuthi silalele umculo wethu esiwuthandayo onesixhumi esibonakalayo esihlanzekile nesintsha.
Indlela ephelele ye-athikili: Kusuka kuLinux » Aplicaciones » I-Musique: Isidlali somculo esivuselelwe futhi esihlukile se-GNU / Linux
Ngayifaka ku-MX KDE 194 kusuka endaweni yayo yokugcina, ihlala esiNgisini futhi noma ngabe ngangibukeka kanzima kangakanani, kwakungekhona ngeSpanish, lapho-ke lapho ngifuna ukulalela umculo ovela kugalari yangicela igama lomsebenzisi leLast.fm kanye iphasiwedi futhi yilapho engithole khona. Ngisanda kuyikhipha futhi ngiyisuse ngokuphelele futhi ngisabheka uhlelo oludlula iStrawberry, okwamanje engizixazulule kakhulu.
Ngiyabingelela, Gerson. Siyabonga ngokuphawula kwakho futhi usitshele ngolwazi lwakho. Njengoba ukwazi ukubona ku-AppImage yayo uma ibonakala ngeSpanish. Sizophenya ngeStrawberry.